Media sy Fanoratan-gazety · Jona, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Jona, 2008
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Jona, 2008
Ozbekistana: Ady amin’ny fanivanana ny aterineto
Ozbekistan 26 Jona 2008
Amin’izao fotoana, i Ozbekistana dia mitoetra ho iray amin’ireo firenena mpamoritra aty amin’ny faritra ary mifehy mafy ny fampahalalàm-baovao mitodika amin’ny daholobe. Na dia misy aza ireo fampanantenana poak’aty [anaran-tsy very] ho fiantohana ny fahalalahàm-pitenenana, dia tsy afa-bela amin’ny fanenjehan’ny governemanta hatrany ny fampahalalàm-baovao. Ny toko faha 5 ao amin’ny...
Cedric Kalonji : Kongo (RDK) an-tsary
R.D. Kongo 12 Jona 2008
I Cedric Kalonji dia mpilaza vaovao ao amin'ny Radio Okapi, ary mpanoratra ny blaogy mety malaza indrindra avy ao Kongo. Fa ankoatra ny asany ao amin'ny radio sy ny fitorahana blaogy dia mpaka sary matihanina koa i Kalonji. Nandritra ny andro maromaro izay dia mitety ny sary apetrany ao amin'ny...
Madagasikara : Nahoana i Afrika no tsy mba avela hijery ny fiadiana izay ho tompon-dakan'i Eorôpa amin'ny baolina kitra UEFA ?
Madagasikara 11 Jona 2008
Raha mbola mankafy eo am-panarahana izay fiadiana izay ho tompon-dakan'i Eorôpa amin'ny taranja baolina kitra UEFA izao tontolo izao, firenena maro any Afrika no tsy afaka manaraka afatsy lalao 8 monja. Ny namana Jentilisa, dia manazava fa ny fikambanana AFNEX (African Network and News Exchange) no nametra izay isan'ny fifandonana...